प्रियजनसँग दिल खोलेर कुरा गर्न टेलिकमको 'भ्वाइस प्याक' ! - Himalaya Post
प्रियजनसँग दिल खोलेर कुरा गर्न टेलिकमको ‘भ्वाइस प्याक’ !
Posted by Himalaya Post | १० चैत्र २०७६, सोमबार १६:५४ |
काठमाडौँ – आफ्ना प्रियजनसँग मोबाइलमा दिल खोलेर कुरा गर्न मन छ, तर ब्यालेन्स सकिएर दिक्दार बन्नुभएको छ ? हालको विषम परिस्थितिमा त झन् धेरै कुरा गर्न मन लाग्छ होला ।
यो अवस्थामा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका अनलिमिटेड डे भ्वाइस प्याक र अनलिमिटेड नाइट भ्वाइस प्याक अफरहरु प्रयोग गर्न सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । यी प्याक प्रयोग गर्दा पैसा सकिने चिन्ता नलिई जति पनि कुरा गर्न सकिन्छ ।
टेलिकमका अनुसार अनलिमिटेड डे भ्वाइस प्याक अन्तर्गत १५ रुपैयाँमा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म जतिपनि कल गर्न सकिन्छ । यो भ्वाइस प्याक खरिद गर्नका लागि सिधै *१४१५*९*२# डायल गर्नु पर्दछ । यो प्याक लिनका लागि DVUNL लेखेर १४१५ मा एसएमएस गर्न पनि सकिन्छ । यो प्याक एक पटक लिए पछि २४ घण्टाभित्र उपयोग गरिसक्नुपर्ने टेलिकमको भनाई छ ।
अनलिमिटेड नाइट भ्वाइस प्याक अन्तर्गत १२ रुपैयाँमा राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म असिमित कुराकानी गर्न सकिन्छ । रातभरी कुराकानी गर्नुपर्ने ग्राहकका लागि यो प्याक निकै उपयोगी रहेको टेलिकमले बताएको छ । यो प्याक लिनका लागि *१४१५*१*५*४# डायल गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी NVUNL लेखेर १४१५ मा एसएमएस पठाएर पनि यो प्याक लिन सकिन्छ ।
विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि *१४१५# मा डायल गरेर आफूलाई उपयुक्त हुने प्याकेज खरिद गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा प्राप्त हुने विभिन्न प्याकेजमध्ये आफूलाई उपयोगी हुने भ्वाइस प्याक छनौट गरेर पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यी प्याकहरु खरिद गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Previousसांसद बस्नेतको एक महिनाको तलब कोरोना नियन्त्रण कोषमा
Nextसामाजिक दूरी कायम गर्न तरुण दलको अपिल
अति दुर्गम १० स्थानमा पनि दूरसञ्चार सेवा
२७ कार्तिक २०७४, सोमबार ०६:३९
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमको ‘फ्रिडम प्याक’
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार १६:४६
मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि एप्स सुचारु
९ पुष २०७४, आईतवार १०:३६
रारा तालमा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा सुरु
२० मंसिर २०७६, शुक्रबार १६:२५